निर्दयी श्रीमान जसले आफ्नै श्रीमतीको टाउको छिनेर प्रहरी कार्यालय गएपछि !! हेर्नुहोस यस्तो भयो !! (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > समाचार > निर्दयी श्रीमान जसले आफ्नै श्रीमतीको टाउको छिनेर प्रहरी कार्यालय गएपछि !! हेर्नुहोस यस्तो भयो !! (भिडियो)
यो पनि हेर्नुहोस त्यसताका भर्खर-भर्खर जापान आइपुगेकी म भाषाको कमजोरीले काम पाउन गाह्रो थियो । न त यहाँ अङ्ग्रेजी चल्थ्यो । भाषा नजानी विकल्प थिएन । कामको खोजीमा हेल्लो वर्क पुगेँ । एउटा रेष्टुरेन्टमा इन्टरभ्यूको लागि पठाइयो ।
कामलाई नै सर्वस्रेष्ठ मान्ने यहाँ फरक देश, फरक भाषाका मानिसलाई नि कत्ति मज्जाले काम सिकाउँछन् । कामलाई ठूलो सानो मानिँदैन । जतिबेला पनि व्यस्त देखिन्छन् । यिनीहरुको जीवन के दिन के रात ! सुत्ने समय कम हुन्छ ।व्यस्त जीवनका कारण ट्रेनमा यात्रामा सुतेको देखिन्छ । यिनै नागरिकको अनुशसासन, लगनशीलता र मेहनतले विकासको द्रुत गतिमा पुगेको देश